बस दुर्घटनामा मृतकको संख्या २२ पुग्यो « Farakkon
१५ जना घाइते मध्य १४ जना बाँके रेफर
राम्री, पुस ६ ।
दाङमा विद्यार्थी बोकेको बस दुर्घटना हुँदा २२ जनाको मृत्यु भएको छ भने १५ जना घाइते भएका छन् ।
घटनास्थलमा ामा २१ जनाको शव फेला परेको छ भने अस्पतालमा एकजनाको मृत्यु भएको छ । घटनास्थल बाट ईलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख एवं डिएसपी प्रेमबहादुर शाहीले २१ जनाको शब घटनास्थलमा फेला पारेको जानकारी दिए । शाहीले खोजी कार्य जारी रहेको हुँदा त्यो संख्या थपिन सक्ने आशंका व्यक्त गरे । घटनास्थलमा फेला परेको शव मध्य महिलाको संख्या ५÷६ जनाजति रहेको बताए ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ को राम्री र हर्नेटी भन्ने स्थानको बीचमा बा ४ ख ९७६६ नम्बरको विद्यार्थी बोकेको बस दुर्घटना हुँदा अधिकाँस विद्यार्थीको मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
दुर्घटनाका घाइते मध्य एकजनाको भने राप्ती अंचल अस्पताल तुलसीपुरमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको ५ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर दाङले जानकारी दिएको छ । प्रदेश प्रहरी प्रवक्ता तथा डिएसपी पुष्पराज मल्ले अस्पतालमा मृत्यु भएका व्यक्तिको समेत सनाखत हुन नसकेको बताए ।
१५ जना घाइते मध्य १४ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको हुँदा उनीहरु सबैलाई राप्ती अंचल अस्पताल तुलसीपुरको प्रारम्भिक उपचारक पछि थप उपचारको लागि बाँके तर्फ पठाइएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जानकारी दिएको छ । बेलुका ९ बजेसम्म मृतक कसैको पनि सनाखद हुन नसकेको डिएसपी शाहीले जानकारी दिए । उद्धार कार्य जारी रहेको हुँदा कम्तिमा पनि रातको १२ बजेसम्म उद्धार चल्न सक्ने ईप्रका तुलसीपुरका प्रमुख शाहीले जानकारी दिए ।
उक्त बस दुर्घटनामा परि घाइते भएका १५ जना मध्य १० जना पुरुष र ५ जना महिला रहेका छन् । घाइते मध्य ९ जनालाई राप्ती अंचल अस्पतालको प्रारम्भिक उपचारपछि थप उपचारका लागि बाँके तर्फ रेफर गरिएको छ ।
अरु सबै घाइते बाँके रफेर